MADAXWEYNAHA DOWLAD-GOBOLEEDKA GALMUDUG OO HAMBALYO U DIRAY UGAAS XASAN UGAAS KAHLIIF – Radio Muqdisho
MADAXWEYNAHA DOWLAD-GOBOLEEDKA GALMUDUG OO HAMBALYO U DIRAY UGAAS XASAN UGAAS KAHLIIF
Madaxweynaha Dowlad-Goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa Hambalyo iyo Bogaadin u diray Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo manta oo ay taariikhdu tahay 25 ka Luulyo, 2016 lagu caleemo saaray xarunta gobolka Hiiraan ee Baledweyne.
Dhambaalkan bogaadinta iyo hambalyada xambaarsan ayuu madaxweynaha Galmudug kasoo diray dalka Hindiya, halkaas oo uu u joogo arimo caafimaad. Madaxweyne Cabdikariim ayaa yiri “Waxaan dareenka farxadeed la qaybsanayaa dadka gobolka Hiiraan guud ahaan, gaar ahaanna qoyska reer Ugaas, waxaanan Alle ka rajeynayaa in uu masuuliyaddaas la garab galo Ugaas Xasan”.
Madaxweyne Cabdikariim ayaa intaas ku daray in ay Ugaasyadu yihiin dhaqan soo jireen ah, isla mar ahaantaasna gacan ka geystay nolosho, dhanqanka iyo nabadgelyada umadda Soomaaliyeed isla mar ahaantsaana ay kaalinweyn ku lahaayeen geeddi-socodyadii lagu soo yagleelay Xukuumadihii KMG aha iyo tan haatan jirta.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Waxaan rajeynayaa in Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu kaalin wax ku ool ah ka qaadandoono nabadaynta iyo isu soo jeedidda dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna kuwa gobolka Hiiraan iyo nawaaxigiisa”.
Dhagayso: Xildhibaanada iyo Qeybaha Bulshada Jubbaland oo soodhaweeyay Howlgalda ka dhanka ah Al-Shabaab.
Madaxweynaha oo Hambalyo u diray Ugaas Xasan Ugaas Khaliif